Firefox 53 haishande pamakomputa ane processor yakura kupfuura Pentium 4 | Linux Vakapindwa muropa
Firefox 53 haishande pamakomputa ane processor yakura kupfuura Pentium 4
Iyo yazvino vhezheni yeMozilla Firefox yanga iri kunze kwemaawa mashoma. Asi inotevera vhezheni iri munzira. Mozilla Firefox 53 ichaburitswa pakati paApril uye ichave ichiwanikwa kune vakawanda, asi kwete wese munhu.
Imwe yeiyo huru nhau dzinounzwa neFirefox 53 ndiko kurambidzwa kwemapuratifomu. Nekudaro, iyo nyowani vhezheni haishande pamakomputa ane processor zvakanyanya mukuru kupfuura Pentium 4 kana AMD Opteron, chimwe chinhu chinoita kuti vashandisi vazhinji vagare vasina kuyedza iyi vhezheni.
Iyo processor haizove yega inorambidzwa neMozilla ichaisa paFirefox 53, iyo yekushandisa sisitimu ichavewo mamiriro. Asi vashandisi veGnu / Linux havazove nematambudziko muchikamu chino sezvo zvirambidzo zvichave zveWindows XP neWindows Vista, anoshanda masystem uko iyo nyowani vhezheni yeMozilla's browser isingashande.
Mozilla Firefox 53 haizotishamise nekutamba-mavhidhiyo
Kana zviri zvekufambira mberi nenhau dzehunyanzvi, vashandisi havachafanirwe kuvimba nechero plugin kukwanisa kutamisa mabhuSezvo iri yeiyi vhezheni yeMozilla Firefox, matab ese achadzimwa nekutadza. Madingindira uye kutaridzika kwebrowser kwave kuchinjwazve, asi nguva ino kuvhenekesa ivo vari vaviri mutoro uye mukushanda, kuve akareruka madingindira uye kuita kuti bhurawuza isashandise zviwanikwa zvakawanda kwazvo muchinhu ichocho.
Iyo bhurawuza yekuverenga maitiro ichagadziridzwa zvakarePane ino chiitiko, ichaongorora mapeji atinoda kuverenga uye ichaita ongororo yenguva ichatitorera isu kuverenga iro peji rewebhu. Basa iro mamwe mashandisiro emazuva ano ekuverenga atove nawo.
Panguva ino, Mozilla Firefox 53 inongowanikwa chete kuburikidza neyekuvandudza chiteshi uye mu beta, tinogona kuzviwana kuburikidza Iyi link. Asi kune avo vari kutsvaga chimwe chinhu chakatsiga chingamirire kusvika Kubvumbi 18 kana kushandisa iyo nyowani Mozilla Firefox 52 Unosarudza chii?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Firefox 53 haishande pamakomputa ane processor yakura kupfuura Pentium 4
Ndine pentium 4
Saka ini handizove nedambudziko?
Zvirongwa zveMicrosoft zvatava kukwanisa kuisa nekushandisa muGnu / Linux
Mozilla Firefox 52 yava kuwanikwa